Allgedo.com » 2012 » October » 19
Home » Archive Daily October 19th, 2012
Ubadkii wadankeena iyo aayihii umadeena – By Abukar Awale (Qaad Diid)
Aduunyadu waxay ku jirtaa tartan loo tartamayo dhaqaale, horumar, awood iwm, ummadeena Soomaaliyeed oo xaqiiqdii ka hartay tartanka 20-kii sano ee lasoo dhaafay noqotayna umad tusaale loosoo qaato marka laga hadlayo Jahliga, nabadgalyo xumida, gaajada iwm, ayaa waxaa hadda soo iftiimaya isbedal rabitaan horumar. Iyadoo ay muuqato Rajo, ummadaSoomaaliyeedna laga dareemayo hiddidiilo iyo hami ka...
21ka Oktoober: Xusuus iyo Xurmo badan – By Abdi Aden Hassan (Zeylici)
Waayaha iyo taxanaha taariikhda ummadaha waxaa soo mara dhacdooyin dhaxal gal ah oo mar walba la xasuustaa, ayna mudan tahay dib u eegidooda iyo falanqayntoodaba, waxayna duruus iyo casharro badan u noqotaa waayaha markaas la joogo oo la barbar dhigaa, sidoo kalena lagu xisaabtamaa oo la qiimeeyaa. Marxaladaha taariikhda Soomaalida waxaa laga soo bilaabaa halgankii AXMED GUREEY ee qarnigii 16aad,...
Shanta arrimood ee saldhigga u ah dhisidda Nabadda iyo Dawladnimada Soomaaliya – By Abdiweli Hassan Mohamed
Soomaaliya waxay muddo dheer ku soo jirtay dagaallo iyo macaluul is-garab socday, kuwaas oo keenay in kumanaan Soomaali ah ay daafaha caalamka ku dayacan yihiin, sidoo kalena dalka gudihiisa ay ka jiraan ammaan-darro, faqri baahsan iyo shaqo yaraan. Arrimahani waxay keeneen in dhallinyaro fara badan ay maalin kasta dalka ka sii hayaamaan, inta hartayna ay weli u sii hangal taagayso sidii ay ku bixi...
Ugaaska beesha Sade, Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi oo baaq kasoo saaray suuqii Balad-xaawo ee gubtay.
Ugaaska beesha Sade ee gobolka Gedo, Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi ayaa baaq uu maanta soo saaray ku sheegay sida uu uga xun yahay masiibada ka dhacday Suuqii weynaa ee Balad-xaawo oo uu dhawaan Dab qabsaday, halkaas oo ay ku bur-burtay hanti fara badan, dadna ay ku dhaawacmeen. Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi. Dhanka kalena, Ugaas Maxamed Ugaas Cumar ayaa dowladda Soomaaliya, Hay’adaha...
Uururka GUYO oo u mahad celiyay cid kasta oo ka qeyb qaadatay hirgalinta Garoonka Diyaaradaha Caabudwaaq
Waxaan salaan sharaf badan iyo mahad Celin u direeynaa maamulka Ku guuleeystay Hirgalinta dhismaha Gagida diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq (Abudwak Interanational Airport) iyo intii gacan ka geysatayba. Hadii aan nahay Ururka Guyo dhamaanteen, waxaan idinkaga mahad celineeynaa, shaqadaas wanaagsan ee aad u qabateen umada deeganka iyo Soomaali oo dhan, waxaana idin leenahay “mahadi ha’idin...
Faah Faahin kasoo baxaysa Nabadoon lagu dilay Kismaayo iyo Howlgalo soconaya
Rag Hubaysan ayaa xalay gudaha Magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ku toogtay mid kamid ah Nabadoonada caanka ah ee magaaladaas kunoolaa. Marxuumka ayaa waxaa toogasho ku dilay Rag aan la ogayn waxa ay yihiin kuwaas oo markii ay nabadoonka dileen goobta isaga baxsaday. Dad kusugan Kismaayo ayaa AOL usheegay in raga dilka gaystay ay bastoolado ku hubaysnaayeen ayna beegsadeen nabadoonka...
Maxkamad kutaal Mareykanka oo Muwaadin Soomaaliyeed ku heshay danbi la xariirinaya Al-Shabaab
Maxkamad kutaal dalka Mareykanka ayaa muwaadin Soomaaliyeed ku heshay danbi ah in dhalinyarada degan dalkaas Mareykanka uu ufudeyn jiray in ay ku biiraan Al-Shabaab-ka Soomaaliya. Maxkamada ayaa soo bandhigtay cadaymo iyo marqaati muujinaya in muwaadinkan Soomaaliyeed oo lagu Maxamuud Saciid Cumar uu galay danbigaan. “Maxamuud Cumar waxaa lagu helay ilaa shan danbi oo kala ah inuu tagay Soomaaliya...
Haddii aad 100$ sadaqaysato,ducodaadu waa la soo koobaya,haddii aad 5-boqol $ sadaqaysatona si wanaagsan ayaa laguugu duceynaya,maad ka soo qaybgeli iidhedan cusub?
Arrimahii dacwada waxay dadka qaarkii ay geliyeen ama ay ka dhigeen qaab ganacsi ah, haddii kii masjidka ka addimaayay uu lacag doonayo,kii dadka qur’aanka baraayayna uu lacag rabo,kii dadka u ducaynaayayna uu lacag rabo,kii dersiga iyo muxaadarada soo jeedinaayayna uu lacag doonayo,yaa Allah dartii u shaqeynaya Haddii uu qof kasta doonayo in loo duceeyo,goormuu isaguna ducaysanaya,kee baase laga...
Dooni siday Hub iyo waxyaabaha qarxa oo lagu qabtay xeebta gobolka Bari “Daawo Sawirad”
Ciidamada badda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa gacanta kusoo dhigay dooni siday waxyaabaha qarxa iyo hub kale oo aad ubadan. Hubkan iyo waxyaabaha qarxa ayaa waxaa laga soo qabtay xeebta deegaanka Qandala ee gobolka Bari, waxaana soo qabashadooda fududeeyay dadka deegaanka oo ciidamada ku wargeliyay Hubkaas. Wararka waxaa ay sheegayaan in hubkaas ay lahaayeen dad cadaan ah gaar ahaan...